News Collection: मलाई आफै वीर्य स्खलन हुने समस्याले सताइरहेको छ। मैले अब के गर्दा हुन्छ ?
मलाई आफै वीर्य स्खलन हुने समस्याले सताइरहेको छ। मैले अब के गर्दा हुन्छ ?
म २० वर्षीय अविवाहित युवक हुँ। मैले अहिलेसम्म हस्तमैथुन गरेको छैन, तर राति सुतेको बेला आफैं वीर्य स्खलन हुन्छ। मैले २१ वर्षीया अविवाहित युवतीसँग एकपटक मात्र सेक्स गरेको थिएँ तर वीर्य स्खलन भएन। मलाई आफै वीर्य स्खलन हुने समस्याले सताइरहेको छ। मैले अब के गर्दा हुन्छ ?
वीर्य स्खलन कसरी हुन्छ ?
पुरुषको यौन उत्तेजनालाई निरन्तरता दिन सके मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रको तेस्रो चरणमा चरमसुख (orgasm) पाउने हाराहारीमा लिङ्गबाट एक प्रकारको सेतो तरल पदार्थ निस्कन्छ जसलाई वीर्य (semen) भनिन्छ। एकपल्ट वीर्यस्खलन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिली (५ मिली भन्नाले १ चियाचम्चाजति) वीर्य निस्कन्छ। यही वीर्यमै शुक्रकीटहरू हुन्छन्।
तपाईंलाई थाहा होला, मूत्रथैलीको मुनि दुईतिर वीर्य थैली हुन्छन्, त्यसको रस नै वीर्यको मुख्य अंश (४६ देखि ८० प्रतिशत) हो भने पौरुष ग्रन्थिको रस पनि पर्याप्त मात्रामा (१३ देखि ३३ प्रतिशत) हुन्छ। अण्डकोष तथा इपिडिडाइमिस (अण्डकोषसँगै जोडिएको एक भाग) बाट आउने रसको मात्रा यस्तै ५ प्रतिशत हुन्छ भने मूत्रनलीका अन्य ग्रन्थिबाट आउने रसको मात्रा त्यसभन्दा पनि कम। वीर्यको रंग सामान्यतः सेतो हुने भए पनि हल्का पहेँलो वा खरानी रंगको हुनसक्छ। यो क्रिमजस्तै र केही च्यापच्यापे प्रकृतिको हुन्छ। वीर्य स्खलन हुनासाथ यो केही वाक्लो हुन्छ र केही बेरपछि नै पातलिने क्रम सुरु हुन्छ। रासायनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यसमा पानी, श्लेष्म तथा शुक्रकीटको पोषण तथा वातावरण सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक थुप्रै रसायन हुन्छन्। माथि नै भनिसकियो कि अण्डकोषमा बनेका शुक्रकीट पनि यही वीर्य थैलीमा आएर बसेका हुन्छन् र वीर्यस्खलन हुँदा रसका साथसाथै बाहिर निस्कन्छ। शरीरभित्रको वातावरणको तापक्रम यसमा सर्ने भएकाले यसको तापक्रम पनि हाम्रो शरीरको जस्तै हुन्छ।
किन आफसे आफ वीर्य स्खलन हुन्छ ?
यौनसम्बन्धी कुरा हामी सचेत मनले मात्र गर्ने कुरा हो भन्ने मान्छौं तर यौनसम्बन्धी कुरा हामी निदाएको बेलामा पनि निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। निदाएका बेला लिङ्ग उत्तेजित हुने वा यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको सपना देखिन्छ। प्रायःजसो पहिलो पटक यो किशोरावस्थामा हुन्छ र यसले यौन विकास राम्रोसँग भएको संकेत गर्छ। यही क्रममा कतिपय व्यक्तिले यौन चरमसुख पनि पाउँछन्। यसरी निदाएका बेला सपनामा यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएर वीर्य स्खलन हुनुलाई नै बोलीचालीको भाषामा स्वप्नदोष भनिन्छ। अंग्रेजीमा भने wet dreams, night fall वा nocturnal emmisions जस्ता शब्दको प्रयोग यही अवस्थालाई वर्णन गर्न गरिन्छ।
स्वप्नदोष भनिए पनि वास्तवमा यो कुनै दोषयुक्त कुरा नभै स्वाभाविक रूपमै हुने कुरा हो। १५ वर्षको भैसक्दा यस्तै ५० प्रतिशतजति किशोरले यसको अनुभव गरिसकेका हुन्छन्। यस्ता यौनस्वप्नहरू एकदमै जीवन्त हुने र वास्तविकतासँग छुट्टयाउनै नसकिने अनुभव प्रशस्तै युवाको छ। यस्ता स्वप्नहरूमा कहिले आफूले वास्तविक जीवनमा यौनसम्बन्ध राख्न नमिल्ने नातेदार, सार्वजनिक स्थान वा जनावर पनि देखिन सक्छ। कतिपय यस्ता यौन उत्तेजक सपना देखिसकेर वीर्य स्खलन हुनासाथ बिउँझिन्छन् भने अर्काथरी वीर्य स्खलन हुनै लाग्दा बिउँझिन्छन्। केहीको त निद्रा नै खुल्दैन र बिहान बिउँझिसकेपछि मात्र थाहा पाउँछन्।
अचेलका केही अनुसन्धानले स्वप्नदोषलाई टेस्टेस्टेरोन हार्मोनको शरीरमा हुने मात्रासँग जोडेका छन्। स्वप्नदोष हुने व्यक्तिहरूमा टेस्टेस्टेरोनको मात्रा बढी हुने देखिएको छ। हुन त यौनको दृष्टिकोणले स्वस्थ व्यक्तिमा यो हार्मोन हुन्छ नै, तर पनि कुनै व्यक्तिलाई स्वप्नदोष नै नहुन पनि सक्छ र यो पनि प्राकृतिक कुरा नै हो।
स्वप्नदोषका सम्बन्धमा उचित तथा सही जानकारी नपाउँदा कतिपय किशोर तथा युवाहरू गहिरो चिन्तामा पर्छन्। पक्कै पनि आफूलाई कुनै गम्भीर रोग लागेको भन्ठान्छन्। तन्ना वा लगाएको लुगामा वीर्यको दाग लाग्ने अनि कसैले थाहा पाउला भन्ने पनि चिन्ता हुन्छ। सपना र त्यसको अर्थ लगाउने चलन नेपाली समाजमा पनि प्रशस्तै छ। अझ यस्ता किसिमको सपनाको अर्थ के होला भन्ने चासो किशोरावस्थामा निकै प्रबल रूपमा हुन्छ। स्वप्नदोषले उचाइ बढाउने पनि होइन।
यो एउटा प्राकृतिक तथा स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यसको उपचारको आवश्यकता पर्दैन। तपाईंको प्रजनन तथा यौन प्रणालीले जबसम्म राम्रोसँग काम गरिरहन्छ यस प्रकारको घटना दोहरिन सक्छ अर्थात् यसलाई चाहँदैमा सजिलै रोक्न सकिने पनि होइन। यसलाई कम गर्न यौन चरमसुख प्राप्त गर्ने वा वीर्य स्खलन हुने उपाय जस्तै कि हस्तमैथुन वा यौनसम्पर्क सहयोगी हुन सक्छन्।
यौनसम्पर्कमा चाहिँ किन वीर्य स्खलन नभएको ?
कुनै एक पटकको घटनालाई लिएर अनावश्यक रूपमा चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन। विशेष गरेर विवाहभन्दा पहिले हुने यस्ता यौन सम्पर्कमा तनाव तथा चिन्ता हुन्छ, जसले यौनसम्पर्क ठीकसँग नहुन सक्छ। कति जनाको त लिङ्ग उत्तेजना नै ठीकसँग नहुन सक्छ भने कसैको शीघ्र स्खल न हुनसक्छ।
वीर्य स्खलन नहुनु वा ढिला हुनुमा यौनप्रति नै नकारात्मक धारणा हुनु, यौन साथीप्रति आकर्षण नहुनु, कुनै विशेष स्थितिमा मात्र यौन चरमसुख वा वीर्य स्खलन गर्ने बानी पर्नु (conditioning) वा यौन तथा वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर कुनै दुःखद घटना घट्नुजस्ता कुरा कारकका रूपमा आउन सक्छन्। रिस, आवेग वा तनावको स्थितिमा वीर्य स्खलन हुन कठिनाइ हुन्छ। केही औषधी (जस्तै कि उदासीपनको उपचारमा प्रयोग हुने) पनि यसको कारण हुन सक्छ। स्नायु प्रणालीको खराबी पनि कारण हुन सक्छ। यौन सपना देख्नु र वीर्य स्खलन हुनुले तपाईंमा शारीरिक रूपमा समस्या नभएको देखिन्छ। त्यसैले अहिले नै अनावश्यक रूपमा धेरै चिन्ता नलिनुभए हुन्छ। समस्या लामो समय कायम रहे मात्र समाधानको खोजी गर्नुपर्छ।